Barcelona Oo Guul Ciriira Ah Ka Gaartay Kooxda Levante, Luuk De Jong Oo Sabab U Ahaa
HomeWararka CiyaarahaBarcelona oo guul ciriira ah ka gaartay kooxda Levante, Luuk de Jong oo sabab u ahaa
April 11, 2022 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Spain 0
Barcelona ayaa gaartay guusheedii 7-aad oo xiriir ah horyaalka La Liga, iyadoo Luuk de Jong uu waqtigii dhimashada madax ku dhaliyay si uu uga caawiyo 3-2 ay kaga badiyeen kooxda Levante.
Qaybtii labaad ayay bilaabmeen goolashu, waxaana rikoodhe ku aftaxday Morales daqiiqaddii 52aad, kaddib markii uu Dani Alves qalad ku galay Son oo garabka weerarka uga ciyaarayay Levante.
Laba daqiiqadood kaddib ayaa rikoodhe kale loo dhigay Levante, waxaanu argagax ku dhacay Barcelona oo layaabtay sida ay mar kaliya ciyaartu iskugu beddeshay daqiiqado gudahood. Garcia ayaa kubbad uu doonayay inuu madax ku qabto, waxay kaga dhacday gacanta, waxaana iyadoon muran iyo shaki toona ku jirin lagu dhigay rikoodhe.
Morales oo rikoodhaha hore dhaliyey ayaa ka gaabsaday inuu mar kale ku ceshado, waxaana qaatay Roger Martí, hase yeeshee goolhaye Tere Stegen ayaa si fiican uga raacay oo ka badbaadiyey kubaddaas.
Barcelona ayaa intaas kaddib ay ciyaartu usoo wareegtay, waxaana beddelay Pedri iyo Gavi oo beddel ugu soo galay, isla markaana ahaa xiddigaha ku suntanaa guushan.
Daqiiqaddii 59aad ayaa kubbad uu dhinaca midig kasoo qaaday Ousmane Dembele waxa madax ku qabtay Aubameyang oo ciyaarta ka dhigay 1-1, halkaas ayaanay ka bilaabantay raacdada guusha ee Barcelona.
Saddex daqiiqadood ayuu Pedri u dhaliyey Barcelona gool labaad isaga kubbad fiican ka helay saaxiibkiisa ay kulliyadda kasoo wada baxeen ee Gavi oo ay mar soo wada galeen ciyaarta, waxaanay natiijada ka dhigeen 2-1.
Levante ayaa mar kale loo dhigay rikoodhe daqiiqaddii 83aad, waxaana kubadda qaatay Morales oo dhinaca qaldan u diray Ter Stegen, isla markaana ciyaarta ka dhigay 2-2.
Xavi Hernandez ayaa beddel kusoo geliyey nasiiblaha madaxa halista ah ee Luuk de Jong dhamaadka ciyaarta oo ay lix daqiiqadood ka hadhsan tahay, waxaanu laacibkani noqday midka guusha u keenay kooxdiisa.
Kubbad uu Jordi Alba kasoo qaaday dhinaca bidix daqiiqaddii 92aad ee waqtiga dheeraadka ah ee ciyaarta ayuu Luuk de Jong ku qabtay madax, waxaanu ku hubsaday shabaqa, sidaas ayaanay Barcelona ku heshay guusha ciyaarta iyadoo ku badisay 3-2.
Barcelona ayaa soo gashay kaalinta labaad ee horyaalka LaLiga, waxaanay haysataa 60 dhibcood iyadoo farqiga goolasha kaga horreysa Sevilla oo ay isku dhibco yihiin, halka Real Madrid oo hoggaanka haysana ay 12 dhibcood ka dambeeyaan.